Home News Shaqsiyaad caan ah oo Siyaasiyiin ah oo loo xiray Masaajid Itoobiya lagu...
Shaqsiyaad caan ah oo Siyaasiyiin ah oo loo xiray Masaajid Itoobiya lagu gabay
Ciidamada Booliska deegaanka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa waxaa ay Xabsiga dhigeen tiro mas’uuliyiin ah oo la sheegay inay sameeyeen dayacaad sababtay in masaajidyo dhowr ah la gubo.
Taliyaha Booliska Gobalka bariga goojaam gashaanle sare Ayaalneh Tasfaaye ayaa sheegay in xubno masuuliyiin ah, oo xilal ka hayay dawlada deegaanka amxaarada loo xir xirey ay gudasho la’aan masuuliyadeed & waliba fal dambiyeedkii falkii foosha xumaa ee lagu gubay masaajidyada.
Waxaa uu sheegay in Xubnaha la xirey ay kala yihiin taliyihii booliska maamulka magaalada moota, madaxii ka hortaga dambiyada booliska magaalada moota, madaxii xafiiska maleeshiyada maamulka magaalada moota iyo taliyahii ciidanka maleeshiyada ee magaalada moota ee gobalka bariga goojam ee Amxaarada.
Dhinaca kale Wakaalada warbaahinta deegaanka Amxaarada ayaa lagu baahiyey in 33 euux oo kale looga shakiyey inay ka dambeeyeen falkii lagu gubey Masaajidyada la xirey,kuwaas oo baaritaano ay ku socdaan.
Deegaano badan oo dalka Itoobiya ah gaar ahaan deegaannada dowlad deegaanka ayaa waxaa dhawaan ka dhacay banaanbaxyo rabshado watay oo looga horjeedey Saddexdii Masjid ee lagu gubey gobolka Amxaarada.